Shea butter hydrates, dị nro, na-echebe ma na-achọ mma na ntutu gị - AFRIKHEPRI
Wenezde, Eprel 8, 2020
Library nke Philosophy Chinese (PDF)
Ọba akwụkwọ mmepe ya (PDF)
Ọba dijitalụ (PDF)
Library nke Theosophy (PDF)
Akwụkwọ Ime Mmụọ (PDF)
Akwụkwọ mmalite (PDF)
Akwụkwọ nke occultism na esotericism (PDF)
Ọmụmụ Ihe Ụlọ Akwụkwọ na New Age (PDF)
Akwụkwọ na-atọ ọchị (PDF)
Mkpado na-agbanwe agbanwe
Chili, igodo ohuru iji luso oke ibu agha
Sayensị na ndụ: ahụ ike
Mmachi sitere n’aka ndị amachibidoro iri nri anụ ezi
Ọmụmụ ihe omimi Russia gosiri na GMOs ga-eme ka mmadụ ghara ịdị ọcha ma ọ mụchaa ọgbọ atọ
Acai beri maka oke ibu ma na - egbochi ọrịa obi na ọrịa shuga
Ahụike ọha na eze
Ihe omimi nke Egypt - Alexandre Moret (PDF)
Ntuziaka Chakra (PDF)
Akwụkwọ edo edo N ° 1 (PDF)
Awa Na-enweghị Ọrịa Ọrịa, Akụkọ Banyere Vitamin B17 (PDF)
Ihe kpatara ya - Hildegarde De Bingen (PDF)
Ike nke ugbu a - Eckhart Tolle (PDF)
Iwu ndị bụ isi nke nsụhọ mmiri - Annie Besant (PDF)
Ihe nzuzo ochie nke ifuru nke ndu - Olu nke 1 (PDF)
General General of Africa - Vol 6 (PDF)
Lelee Agha Kasị Mma (2000)
Lelee Agbamakwụkwọ nke Afọ (2014)
Lee Anya Mmiri nke Sun (2003)
Lelee ịhụnanya (2016)
Leba anya na Compton (2015)
Lelee na ị gaghị egbu (2016)
Lee ka ha gburu Nna m (2017)
Elekere oji (2018)
Lelee Ịhụnanya & Egwuregwu (2011)
Lelee Notorious BIG (2009)
Black chi anthology
Debanye aha na netwọk mmekọrịta nke Afrikhepri
Black ojii na Europe oge ochie
Kpee ederede iji kwalite ọdịbendị Afrika
Ọ dịghị mmadụ ọ bụla mere ka ọ bụrụ ohu, ọ bụghị ndị a họọrọ, ọ dịghị ala nke Chineke kwere nkwa
AFURAKA / AFURAITKAIT - Mmalite nke okwu a bu “Africa
Etymology nke mba Afrika
Mpụ mbụ n'ime ụwa
Mmalite nke okwu Kilimanjaro
Mmepeanya Dravidian na India
Apollonius nke Tyana ọ̀ bụ “ezigbo” Kraịst?
Gaa na mmalite nke ikpe ziri ezi na omume: Maat
Nkọwa sayensi maka ọgwụgwọ ọrụ ebube na ike nke ikpe ekpere
Osho, onye na-ahụkarị ihe omimi nke na-eweta amamihe nke oge ochie
Akwụkwọ Nsọ, otu ihe ma ọ bụ ihe ọ bụla nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ Sumerian?
ISIS: Mbilite n'Ọnwụ nke Kraịst Ga-alaghachi n'Ijipt Oge Ochie
Jizọs bụ onye isi ojii na onye sitere n’agbụrụ Africa, dị ka ihe odide a chọtara n’oge na-adịbeghị anya
Nnabata Ime Anwansi Isis
Ndị lupercales, bụ mmalite nke Saint-Valendin
Gini bu Ihunanya ma obu Kimuntu?
Marcus Garvey: Nna nke ịdị n'otu nke ndị Africa
General akụkọ ihe mere eme nke Africa (Mpịakọta nke 4)
Nkpukpo nke ndi isi ojii - Alain mabanckou
Akụkọ ọzọ - Claude Ribbe
Okpukpe Africa - Mbog Bassong (Akwụkwọ)
Kinky n'enweghị njigide
Ogologo oge m dị oji - Maya Angelou
Quilombos azụ palmares
Egwuregwu ndị enyi ojii
Ụmụ nwanyị AFRICA
OZI AKWỤKWỌ NA AKWỤKWỌ
Ndebanye / nbanye
NDỊ BỤRỤ NTỤRỤ NA NDỊ ỌZỌ
MEMORIES & IHE
AKWỤKWỌ AFRICAN NA SAGES
PHILOSOPHY & ỤBỌCHỊ
Ihe omimi na psychology Health and Medicine
AJỤMỤ NA ỤBỤRỤ
UZI NA NDỊ EZIOKWU
AKWỤKWỌ NKE GROBLI NDỤMỌDỤ
NDỤMỌDỤ / OZI
EGO HERE AHOBROBROB ROBOT MAKA MAKA MAKA ANDBỌ MA NA FBARA YOURLỌ NIILE MAKA
Ezubere nke onwe-Paramahansa Yogananda (Audio)
EHANG 184: NDỊ KWESỊRỊ ECHICHE ỊGBANWE YA Ị BỤ
NA 2020, MGBE ANYỊ BỤ AHỤ BỤ N'ỤWA NA AFRICA
Enwere ngwọta ime mmụọ maka nsogbu gị niile - Wayne Dyer (Audio)
Christiane Taubira na-achọ nkwụghachi ụgwọ maka ngalaba ndị si mba ofesi France, ndị mbụ gbara ohu
Nzuzo nke ịma mma nke chocolate
Mmalite na akụkọ ihe mere eme nke bogolan
Uru nke mmanụ cashew maka ntutu na anụahụ
Mmalite na akụkọ ihe mere eme nke pel na Afrika
Kedu iwu ndị dị mfe iji kwanyere ịzụlite ikike gị
Nke a bụ otu esi enweta zuru oke
Ihe edozi ihe Halal n'Africa na ebe obibi ya
Ngwọta ise ga-enyere gị aka ịmalite ntutu isi gị ngwa ngwa
Nlekọta ọgwụgwọ si Sahara
Gini mere eji eme ihe eji eme ka ndi Africa na ndi American-Americans mgbe niile dika adighi mgbe obula?
Michael Jackson: ndu ​​ndu - Akwukwo (2011)
Ike nke ntinye - Akwụkwọ edemede
Nnabata onwe - Akwukwo odi
Zeitgeist: Eziokwu Zoro Ezo - Akwụkwọ Ndekọ
Kwame Nkrumah - Akwụkwọ edemede (2017)
N'otu oge, alaeze nke Africa - Akwụkwọ nyocha
Ntughari - Akwukwo (2018)
Nyere Johnny Clegg, onye ọcha Zulu (Video)
Anyị bịara dịka ndị enyị - Akwụkwọ Ndekọ (2015)
Echi - akwukwo (2015)
Ghana na-ebunye ike nuklia ma bido ime mbara igwe
United States, ochichi onye kwuo uche ya nke metụtara ọnwụ?
Mosquirix, ọgwụ ogwu megide ọrịa ịba (Ọrịa)
Umu umuaka Ubongo, umuaka ndi Tanzania na acho Africa
LOU JING: AFRO-CHINESE, NA-AGBANWEE N'ỤLỌ NTỤTA, NA-EJI AJỤJỤ RACISM NA KINỊNE KWESỊRỊ
AKỤKỌ-AKỤKỌ NA AKWỤKWỌ NDỊ ECHICHE, NTỤTA NKE TOMORROW
Musiclọ Ọrụ Egwuregwu Africa (AMI), ụlọ akwụkwọ egwu a na-akwanyere ùgwù na-emepe ọnụ ụzọ ya na Gabon
Ịhụnanya mmekọrịta - Eckhart Tolle (Audio)
Ike nke ntụkwasị obi - Brian Tracy
Ịga Serenity - Eckhart Tollé (Audio)
Ike nke ihe ọmụma gị - Joseph Murphy (Audio)
Omume asaa nke ndị na-ahụta ihe niile ha na - eme - Stephen Covey (Audio)
Mmalite nke ụmụ mmadụ dị ka Tablet Sumerian - Nkebi 2 (Audio)
Iwu nke obi - Dan Millman (Audio)
Akwụkwọ nke Mmụọ - Allan Kardec (Audio)
Welcome Nwee obi ụtọ
Shea na-eme ka ntutu gị dị nro, mee ka ọ dị nro, na-echebe ma na-achọ mma
egwu Nwee obi ụtọ
Gịnị bụ mmeghachi omume gị?
I meghachiri "Shea moisturizes, softens, na-echebe ma na-achọ mma ..." Sekọnd ole na ole gara aga
Lo jirila shea nut n'ọtụtụ akụkụ nke Africa kemgbe puku afọ. A na-ekwu na Queen Nefertiti ji ọmarịcha mma ya na ojiji nke butter shea n'ihi na ebe nchekwa abụba a na-enweta site na mkpụrụ nwere ihe mmezi anụ ahụ pụrụ iche.
Shea nwere ezigbo omume ọma akpụkpọ: ọ moisturizes, soothes, na-echebe na mma na ya Wezuga ọgaranya mejupụtara unsaponifiables, vitamin (A, D, E, F) na latex. Usoro nchikota uzo nke artisanal nke nwanyi Siby na-emeputa ihe di nma na nke okike nke ejigidere ihe omuma ya niile. N'ọnọdụ ọ bụla, gbazee butter n'ọbụ aka gị tupu itinye akwụkwọ. Butter a gha ezigbo mmiri mmiri.
Moisturizer nke elu-ala nke ihu
Ihu ihu bụ onye na-erite uru nke ojiji nke shea butter. Iji na-esi ọnwụ na mpaghara ndị gbara ọsọ (ntọala nke imi, mgbaaka nke egbugbere ọnụ). Massage maka nkeji iri. Nsogbu nke akpụkpọ anụ bụ okpukpu atọ:
ekwedo: ọ bụ ọgaranya nke bọta shea na ihe ndị a na-apụghị ịgbanwe agbanwe na vitamin F nke ga-eme. Site n'inwe akpụkpọ ahụ gị mgbe ị gwọchara ya, ị na-eche ọdịiche ahụ.
hydration: ihe odide dị ala na-achọ mkpa hydration ọzọ. Ị ga-eche ya banyere ọdịdị ahụ gị ozugbo ngwa ahụ zuru ezu.
Nchedo: na butter ga-abanye kpamkpam na ị ghaghị ịhụ satin. Mana nchebe dị adị n'ezie, ọ ga-anọgide na-adịgide ogologo oge. Egbugbere ọnụ na-etinye ya ngwa ngwa na n'oge akọrọ, ị ga-ejiri shea na-eyiri ha mgbe nile bụ nke ga-abụ egbugbere ọnụ dị ebube.
Obi iru ala
Shea na-enye nchedo hypodermị dị ịrịba ama site na ya na-ekpo ọkụ na-eme ka ọ bụrụ na ihe e ji egbochi elastase na-enye nchebe iji gbochi ya.
Ndozi ngwa ngwa: ngaji na bat ị na-ekpo ọkụ, otu akwa oyi a na-adịghị ahụ anya ga-edozi ahụ dum. Ihe ngwọta ahụ: Ịhịa aka na akwara ụkwụ. Mmetụta nke ahụ ike ahụ bụ ozugbo.
Onye na - ahụ maka ihe na - egbochi ntutu: ike mgbanwe na nkpa
Ngwa ntughari. Usoro ọgwụgwọ kachasị mma: ụbọchị tupu ncha ntutu iji mezie ntutu site na ịta isi ahụ na nnukwu bọta. Kechie ntutu na akwa nhicha ọkụ. Keratin gị ga-enweta ihe niile ọ chọrọ.
Ncha ntutu. Nkeji iri mgbe shampoo, na ntutu akọrọ, obere ukpa iji nye ndụ na ndụ.
Enweghị oke mkpa maka onwe ya, ahụ nwata ahụ
Omenala Africa na - eme ka ọ bụrụ ihe dị mkpa n'etiti nne na nwa site na ịrụ ọrụ kwa ụbọchị. Nke a bụ mgbochi kachasị mma megide iwe ọkụ mgbe niile.
Egwuregwu na shea
Shea bụ ihe bara uru maka onye na-eme egwuregwu. Ịhịa aka na akwara tupu ị gbalịsie ike na-eme ka ha nwee mgbanwe ma na-enye ohere ka a gbakee. Ọ dị afọ ndụ ọ na-eji n'Africa maka nlekọta ahụ ike emeela ka ọ bụrụ ihe a kwadoro nke ọma nke ndị egwuregwu kacha elu.
Tupu ọzụzụ nke anụ ahụ: Na-ebido mmalite ma na-ekpo ọkụ.
Mgbe ọzụzụ nke anụ ahụ: mgbake ngwa ngwa na mmelite nke drainage na mkpochapu toxins site na muscle mebiri emebi.
mmerụ idiocha shea
N'ihi na ọnụnọ nke vitamin A, Shea mmemmem agwọ ọrịa ma na disinfection na ibuso dermatitis, chapped akpụkpọ, Burns na akpụkpọ onya ma ọ bụ crevices.
Shea bụkwa ezigbo mmachi akpụkpọ anụ megide ihu igwe na anyanwụ. Ọ bụ nchebe nke sitere na ultraviolet nke na-akwalite mgbochi nke ụfọdụ ihe ndị na-edozi ahụ, ihe onwunwe n'ihi ụda oge.
Ahụike na ntụrụndụ
Tinye otu ngaji n'ime bat ị na-ekpo ọkụ na otu akwa oyi a na-ahụ anya ga-edozi ahụ dum. Kpoo aka na apata ụkwụ gị nke ọma. Mmetụta nke ahụ ike ahụ bụ ozugbo.
Shea butter 500 g - Organic, akọwaghị ya, dị ọcha na eke - 100% dị ọcha
12,25€ dị na ngwaahịa
2 dị ọhụrụ site na 12,25 €
ka nke Eprel 7, 2020 8:20
Mpempe shea anyị bụ 100% organic na akọwapụtaghị ya. N’aka ozo, vitamin niile dị na shea butter na-adịgide n’ime ngwaahịa a rụchara, n’ihi na nke ikpeazụ a anaghị enweta ọgwụgwọ mmezi kemịkal ọ bụla.
Nke a shea butter a dị ọcha kpamkpam ma kọwaa ya, vitamin ya niile dị ugbu a na enweghị ndebe. A na -enye shea butter n'ime akpa plastik transperent iji mee ka ọ dị ọhụrụ.
A na-egbutu shea shea anyị kwa ụbọchị dabere na ọnụ ọgụgụ iwu, agba ya na-adị iche iche site na isi awọ ruo odo na ụdị ya na-emebi emebi.
Shea butter dị oke mma na ncha, lotions, egbugbere ọnụ ọnụ, ndị na-egbu ahụ na ndị na-ahụ maka mmiri. Nke a bụ butter shea bụ 100% organic, enweghị ịkọwapụta, dị ọcha na nke eke, na-enweghị mgbakwunye nri ma ọ bụ ihe nchekwa.
Gwa n'asụsụ gị
Soro ndị debanyere aha Facebook 21k!
Pịa ebe a iji soro anyị ...
Sonye na ndị ntanetị aha 2.7k Twitter!
Want chọrọ ide na saịtị a?
Pịa ebe a iji zipu edemede ozo ...
Sonye na ndị ntinye aha 29 LinkedIn!